Application Specialist ( Medical Devices ) | Job in Myanmar ﻿
2.9.2018, Full time , Trading
•	Interested in learning and demonstration medical device application activities
•	M.B.B.S. holders can apply
•	Those with at least 1 year relevant experience are preferable
•	Be flexible in any situations and can work under pressure
Job Function: Application Specialist ( Medical Devices )
•	မိမိပြုစုရမည့်သူများကိုစိတ်ရှည်သူဖြစ်ရပါမည် •	Customer များအပေါ်စိတ်ရှည်စွာပြောဆိုရှင်းပြနိုင်ရပါမည် •	ပညာအရည်အချင်းနှင့်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု့ အပေါ်မူတည်ပြီးလစာညှီု နှိုင်းပါမည်
•	Customer များအပေါ်စိတ်ရှည်စွာပြောဆိုရှင်းပြနိုင်ရပါမည် •	ပညာအရည်အချင်းနှင့်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု့ အပေါ်မူတည်ပြီးလစာညှီု နှိုင်းပါမည်
•	Can perform under pressure and be flexible in any situations •	Salary negotiations depend on years of experience and levels of education
•	To apply registration of new, renewal product and any changes in the information of product to FDA •	To assist the company to comply from FDA requirements •	To assist RA Manager
•	ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး ပစ္စည်းရောင်းချခြင်းကို စိတ်ဝင်စားသူ လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	Sales & Marketing (Medical)
•	အသင်းအဖွဲ့ နှင့်လုပ်ကိုင်နိုင်ခေါင်းဆောင်စိတ်ရှိရပါမည် •	အများနှင့်ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရပါမည် B. Med Tech ( Imaging ) for Product Specialist
•	ရံဖန်ရံခါ အစိုးရရုံးများကိုသွားလာနိုင်ရမည် •	အတွေ့ အကြုံပေါ်မူတည့်ပြီးလစာညှီ နှိုင်းပါမည်
•	အသင်းအဖွဲ့ နှင့် တွဲလုပ်နိုင်ရပါမည် •	ခေါင်းဆောင်စိတ်ဓါတ်ရှိရပါမည် •	သွက်လက်ဖြတ်လတ်ပြီးလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု့ ကိုရှေးရှုနိုင်ရမည် Marketing Executive ( Philips Home Appliances )
•	Can perform withagood team of various members •	Can beagood leader •	Can perform under pressure and be flexible in any situations •	Salary negotiations depend on years of experience and levels of education (MBBS)
•	အသင်းအဖွဲ့ နှင့်လုပ်ကိုင်နိုင်ရပါမည် •	ခေါင်းဆောင်စိတ်ဓါတ်ရှိပြီးလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု့ ကိုရှေးရှုနိုင်ရပါမည် B.S. Nursing or B. Pharm for Productive Executives
•	သွက်လက်ဖြတ်လတ်ပြီးလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု့ ကိုရှေးရှု နိုင်ရမည် •	အသင်းအဖွဲ့ နှင့်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီးတာဝန်ယူ တာဝန်ခံစိတ်ရှိရမည် •	လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ့ နှင့်ပညာအရည်အချင်းပေါ်မူတည်ပြီးလစာညှီနှိုင်းပါမ ...
•	Developaconsistent compensation philosophy in line with work culture and organizational objectives •	Develop the training function in order to achieve and maintain accreditation and to ensure that training provided supports the aims and objective of the organization. •	Assess employees needs by conducting organizational psychology surveys to find out what motivates and engages employees •	Prepare job descriptions, job analysis, job evaluations, and job classifications •	Succession Planning for the Organization and Business Mod ...
•	လုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားပြီးသွက်လက်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ရမည် •	အသင်းအဖွဲ့ နှင့်လုပ်နိုင်ပြီးခေါင်းဆောင်စိတ်ရှိရမည်
•	အသင်းအဖွဲ့ နှင့်လုပ်ကိုင်နိုင်ရပါမည် •	ခေါင်းဆောင်စိတ်ဓါတ်ရှိပြီးလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု့ ကိုရှေးရှုနိုင်ရပါမည် •	ပညာအရည်အချင်းနှင့်အတွေ့ အကြုံ ပေါ်မူတည်ပြီးလစာညှီနှိုင်းပါမည် B.S. Nursing or B. Pharm for Productive Executives
•	အသင်းအဖွဲ့ နှင့်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည် •	ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု့ ကိုရှေးရှုနိုင်ရမည် ဆေးဆိုင်အရောင်းဝန်ထမ်း (ထူးသဇင်ဆေးဆိုင်၊ လမ်းမတော်မြို့ နယ်)
Medical Device Application Specialists
•	Can go for overseas training for better product knowledge •	Be flexible in any situations and can work under pressure •	Good communication skills in English
•	အများနှင့်ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည် •	အတွေ့ အကြုံပေါ်မူတည်ပြီးလစာညှီနှိုင်းပါမည်
•	အသင်းအဖွဲ့ နှင့် တွဲလုပ်နိုင်ရပါမည် •	ခေါင်းဆောင်စိတ်ဓါတ်ရှိရပါမည် •	သွက်လက်ဖြတ်လတ်ပြီးလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု့ ကိုရှေးရှုနိုင်ရမည် Sales Associates (Philips Home Appliances)
•	အသင်းအဖွဲ့ နှင့်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည် •	ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု့ ကိုရှေးရှုနိုင်ရမည် ကွန်ပျူတာစာစီစာရိုက်ကျွမ်းကျင်
•	ခေါင်းဆောင်စိတ်ဓါတ်ရှိပြီးလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု့ ကိုရှေးရှု နိုင်ရမည် •	အတွေ့ အကြုံ့ နှင့်ပညာအရည်အချင်းပေါ်မူတည်ပြီးလစာညှီု နှိုင်းပါမည် for Medical Engineering Dept
•	Can perform withagood team of various members •	Can beagood leader •	Can perform under pressure and be flexible in any situations •	Salary negotiations depend on years of experience and levels of education. (MBBS, BVS, BDS) For Mandalay
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည် (Adobe Photoshop)
•	Sales & Marketing အတွေ့ အကြုံ့ရှိပါကကောင်းမွန်ပါသည် •	Sales & Marketing အတွေ့ အကြုံ့မရှိပါကလည်းကောင်းမွန်စွာသင်ကြားပေးပါမည် •	Sales & Marketing ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးကြိုးစားလုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိရပါမည် •	ခေါင်းဆောင်စိတ်ဓာတ ...
•	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရမည် •	Sales & Marketing (Electronic)
•	Marketing ကို စိတ်ဝင်စားပြီး Medical Product နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်စွာ ရောင်းချနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Product Executive (Medical)
•	အသင်းအဖွဲ့ နှင့်လုပ်ကိုင်နိုင်ရပါမည် •	ခေါင်ဆောင်စိတ်ဓါတ်ရှိပြီးသင်ကြားလိုစိတ်ရှိရပါမည် •	အတွေ့ အကြုံ့ နှင့်ပညာအရည်အချင်းပေါ်မူတည်ပြီးလစာညှီနှိုင်းပါမည် •	For ( Cosmetician )
•	အသင်းအဖွဲ့ နှင့်လုပ်ကိုင်နိုင်ရပါမည် •	အတွေ့ အကြုံ့ ပေါ်မူတည်ပြီးလစာညှီနှိုင်းပါမည်
•	အသင်းအဖွဲ့ နှင့်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီးခေါင်းဆောင်စိတ်ဓိတ်ရှိရမည် •	လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရအမျိုးသားများနှင့်သာသင့်တော်ပါသည် •	လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံပေါ်မူတည်ပြီးလစာညှီနှိုင်းပါမည်
•	ခေါင်ဆောင်စိတ်ဓါတ်ရှိပြီးသင်ကြားလိုစိတ်ရှိရပါမည် •	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။
•	အသင်းအဖွဲ့ နှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရပါမည် •	မိမိနှင့်ထိတွေ့ ဆက်ဆံရမည့်သူများကိုကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံနိုင်ရပါမည်
•	အသင်းအဖွဲ့ နှင့်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီးကူညီလိုစိတ်ရှိရပါမည် •	အတွေ့ အကြုံ ပေါ်မူတည်ပြီးလစာညှီနှိုင်းပါမည် •	Sales for pharmacy
•	အသင်းအဖွဲ့ နှင့်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီးခေါင်းဆောင်စိတ်ရှိရမည် •	အတွေ့ အကြုံ့ နှင့်ပညာအရည်အချင်းပေါ်မူတည်ပြီးလစာညှီနှိုင်းပါမည်
Application Specialist ( Medical Devices ) Health & Medicine jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Yee Shin Co., Ltd. Health & Medicine jobs Health & Medicine jobs Application Specialist ( Medical Devices ) Jobs in Myanmar, jobs in Yangon